ကုထုံးခွေးများသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။
ပင်မစာမျက်နှာခွေးများကိုဂရုစိုက်ပါကုထုံးခွေးများသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။
ကုထုံးခွေးတွေက ဘယ်သူက ကူညီနိုင်မလဲ။
တိရိစ္ဆာန်များကို 10 မိနစ်မျှသာ နို့စို့ခြင်းကုထုံး Washington State University မှ သုတေသီများ၏ လေ့လာမှုအရ ကျောင်းသားများ၏ စိတ်ဖိစီးမှုကို သိသိသာသာ သက်သာရာရစေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထို့အပြင်၊ ကုထုံးခွေးများသည် အလေးပေးထားသော ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏ သိမြင်နိုင်စွမ်းစွမ်းရည်ကို နို့စို့ခြင်းအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ပြီးနောက် ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်—အခြားကျောင်းတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲရေးရွေးချယ်စရာများထက်ပင် ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်သည်။
ခွေးကုထုံး၊aတိရစ္ဆာန်ကုထုံးအမျိုးအစားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပြဿနာများရှိသူများကို ကူညီရန် ခွေးများကို အသုံးပြုသည်။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုပေးခြင်းဖြင့် ကုထုံးခွေးများသည် တစ်ဦးချင်းကုသမှုအစီအစဉ်များတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်သည်။
တိရိစ္ဆာန်ကုထုံးသည် လူများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် သို့မဟုတ် ကူညီရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ လက္ခဏာအမျိုးမျိုးကို အလုံးစုံ သက်သာစေသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ။ အစားထိုးကုသခြင်းထက် အခြားကုသမှုများနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ကုထုံးခွေးများသည် လူသားနှင့် တိရိစ္ဆာန်ဆိုင်ရာ နှောင်ကြိုးကို အဓိကအားဖြင့် ဆွဲခေါ်ကြပြီး၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဆက်သွယ်လိုသော၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဆက်နွှယ်လိုသော ဆန္ဒပါ၀င်သည်။
ကုထုံးခွေးတစ်ကောင်နှင့် အချိန်ဖြုန်းခြင်းဖြင့် သင်သည် လူမှုဆက်ဆံရေးပြုခြင်းအပါအဝင် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ရရှိစေသည့် ၎င်းတို့နှင့် နှောင်ကြိုး၊ နာကျင်မှုသက်သာ; ပျင်းခြင်းနှင့် အထီးကျန်ခြင်းကို လျော့ကျစေခြင်း၊ တိုးတက်လာသောလှုပ်ရှားမှု သို့မဟုတ် မော်တာကျွမ်းကျင်မှု၊ မြှင့်တင်ထားသောစိတ်ဓာတ်; တိုးမြှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု; နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေသည်။
တစ်ဦးချင်းစီ၏ သီးသန့်အခြေအနေနှင့် လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ မတူညီသော ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မီရန် တိရစ္ဆာန်ကုထုံးကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည်။
ပုံမှန်တိရိစ္ဆာန်ကုထုံးသင်တန်းတစ်ခုအတွင်း၊ လူသားကိုင်တွယ်သူသည် လူနာအား ၎င်းတို့၏ကုထုံး၏ သီးခြားပန်းတိုင်များပြည့်မီစေရန် ဆရာဝန်၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် ခွေးနှင့်လူနာနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ပါသည်။
ဖတ်ရန်: 2022 ခုနှစ်တွင် အကောင်းဆုံး ခွေးပန်းကန်ကို ရွေးချယ်ရန် နောက်ဆုံး လမ်းညွှန် (8 အမျိုးအစား)
ကုထုံးခွေးများသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ခွေးများနှင့် မတူညီကြောင်းကိုလည်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ မသန်စွမ်းသူများ၏ ဘဝလမ်းကြောင်းကို ကူညီရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ခွေးများကို အထူးလေ့ကျင့်ထားသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ကုထုံးခွေးများသည် နှစ်သိမ့်မှုနှင့် အာရုံစိုက်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ခွေးများနှင့်မတူဘဲ၊ ၎င်းတို့ကို Americans With Disabilities Act က အကျုံးမဝင်ပေ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ပိုင်ရှင်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကုထုံးခွေးများကို ကန့်သတ်အများပြည်သူပိုင်နေရာများသို့ ယူဆောင်လာ၍မရပါ။
တိရိစ္ဆာန်ကုထုံးသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျယ်ပြန့်သော အခြေအနေရှိသူများကို ကူညီပေးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အဖြစ်များသော ကလေးဘဝ မော်တာချို့ယွင်းမှုဖြစ်သော ဦးနှောက်ချို့ယွင်းသော ကလေးငယ်များကို ကူညီရန် ကုထုံးခွေးများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဖတ်ကြည့်ပါ: ခွေးတွေက Blue Cheese စားနိုင်သလား ခွေးများအပေါ် ဒိန်ခဲစားသုံးမှု၏ သက်ရောက်မှု
အထူးသဖြင့်၊ ကုထုံးခွေးများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး၏ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဓိကပါဝင်ပတ်သက်နိုင်သည်။ ဦးနှောက်ချို့ယွင်းသော ကုထုံးများ.
ကုထုံးခွေးနှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်ချို့ယွင်းသောကလေးများသည် ကြွက်သားများနှင့် ကြွက်သားအရိုးစုစနစ်ကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန် လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ခွေးများသည် ကလေးများအား အလုပ်တွင်ပါဝင်ရန် လှုံ့ဆော်ပေးတတ်သည်။ ကုသမှုအတွက် ၎င်းတို့၏ပန်းတိုင်များကို ဖြည့်ဆည်းပါ။ ဆွေးနွေးပွဲများကို ပိုပျော်စရာကောင်းပြီး စိတ်ဖိစီးမှုနည်းအောင် ပြုလုပ်ပါ။
ထို့အပြင်၊ ကုထုံးခွေးများသည် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာ ခံစားချက်များကို လျော့ကျစေခြင်းဖြင့် များစွာသော သော့ချက်များနှင့် ဖိစီးမှုဆိုင်ရာ အမှတ်အသားများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ နာကျင်မှု၏အာရုံခံစားမှုကိုလျှော့ချ; လူမှုရေးပံ့ပိုးမှုတိုးမြှင့်; စေ့ဆော်မှု၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုတို့ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
ဖတ်ရန်: အကောင်းဆုံး ခွေးအမှိုက်ပုံး ၅ ကောင်- ခွေးလေးများ၏ အိမ်တွင်း အိုးခွက်ပန်းကန်များ ဖြေရှင်းချက်။
တစ်ဖန်၊ ဤအချက်များသည် ကုထုံးခွေးများသည် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းအပါအဝင် စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများစွာအတွက် အကျိုးရှိနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှု; အော်တစ်ဇင်ရောင်စဉ်ရောဂါ၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ နှင့် အာရုံစူးစိုက်မှု ချို့ယွင်းမှု လွန်ကဲမှုရောဂါ (ADHD).
ထို့အပြင် သုတေသနပြုချက်များအရ ခွေးများသည် ကုသခြင်းကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း ပြသထားသည်။ Post-traumatic stress disorder ၏ လက္ခဏာများ (PTSD)။
ထို့အပြင်၊ ရေရှည်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနများရှိလူများသည် ကုထုံးခွေးများထံမှလည်း အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်ပါသည်။ တကယ်တော့၊ အချို့သောစက်ရုံများသည် လူနာများ၏ စိတ်နေစိတ်ထားနှင့် သုခချမ်းသာကို မြှင့်တင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော တိရစ္ဆာန်ကုထုံးပရိုဂရမ်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် Psychogeriatrics လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးဌာနများတွင် ရေရှည်အသုံးပြုသော ကုထုံးခွေးများသည် စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကို လျော့ပါးစေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ လူမှုဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ကုထုံးခွေးများသည် လူနာများတွင် အပြုသဘောဆောင်သော စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုများကို ထုတ်ပေးသည်။
ကုထုံးခွေးများကို ကင်ဆာကုသမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နာကျင်မှုနှင့် မသက်မသာဖြစ်သည့် နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ စသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေများစွာ၏ လက္ခဏာများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ခွဲစိတ်မှု သို့မဟုတ် လေဖြတ်ပြီးနောက် လူနာ၏ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုတွင် အပြုသဘောဆောင်သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်သည်။
ကုထုံးခွေးနှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် လူနာသည် ၎င်းတို့၏ ကုထုံးများကို ပြီးမြောက်ရန်၊ မကြာခဏ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး မှန်ကန်စွာ လှုပ်ရှားရန် (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေရှိသူများအတွက် အကျိုးရှိစေသည်)။ ကုထုံးခွေးများသည် နာကျင်မှုလက္ခဏာများကို သက်သာစေနိုင်သည်။
ဖတ်ရန်: အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး: ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများ၏အရေးပါပုံနှင့်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမကြာခဏလာရောက်သင့်သနည်း။
ကုထုံးက ခွေးဖြစ်နိုင်ပေမယ့် လူတွေအတွက် အလွန်အကျိုးရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးပြဿနာမျိုးစုံနဲ့၊ လူတိုင်းအတွက် အမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ကြောင်း သတိပြုဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပထမအချက်မှာ အချို့သောလူများသည် ခွေးများကိုကြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်မသက်မသာဖြစ်တတ်ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ခွေးကုထုံးသည် ဤတစ်ဦးချင်းစီအား ပိုကြီးသော စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဖြစ်စေသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ လူများစွာသည် တိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဓာတ်မတည့်သောကြောင့် ခွေးကုထုံးဖြင့် မသက်မသာ ဓာတ်မတည့်မှု လက္ခဏာများကို ပိုဆိုးလာစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ တိရစ္ဆာန်များသည် အချို့သောရောဂါများ သို့မဟုတ် ရောဂါပိုးများကို သယ်ဆောင်သူများဖြစ်သောကြောင့် အချို့သောဆေးရုံများ သို့မဟုတ် အလားတူရေရှည်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဌာနများသို့လည်း ဝင်ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
သို့သော် အချို့သောကိစ္စများတွင် ကုထုံးခွေးများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စမ်းသပ်မှုမပြုလုပ်မီ အချိန်အတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
ကုသရေးခွေးများသည် လူများကို ၎င်းတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး နှစ်ခုစလုံး တိုးတက်အောင် ကူညီပေးရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသော ကုသမှုအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၊ ကုထုံးခွေးများသည် ကျန်းမာရေးအခြေအနေများစွာရှိသူများတွင် နာကျင်မှုနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို လျော့ကျစေပြီး စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် သုခကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
View Post: 2,351
ယခင်ဆောင်းပါးဘာကြောင့် ငါ့ခွေးက တံခါးနားမှာ အိပ်နေတာလဲ။ သိထားရမည့်အချက် ၅
next ကိုဆောင်းပါးခွေးခြေရာခံခြင်းကို ရှောင်ပြေးနည်း – သိရန် အခြေခံအချက် ၁၀ ချက်
သင့်ခွေးလေး ဆုံးသွားအောင် ဘယ်လိုစီစဉ်မလဲ – သိထားသင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက်
မတ်လ 21, 2022